Mgbukpọ ahụ e dere ede na nzuzo: Amerindians nke ihe mgbochi na-achọ iyi na Amazon - AFRIKHEPRI
Mgbuchi obi ike: Ụmụ amaala America na-eyi egwu mmiri Amazon
Ụzọ 101 iji gbanwee ndụ gị - Wayne Dyer (Audio)
Lonye France nwere nnukwu ume GDF Suez ka e boro ebubo n'izu a na-etinye ndụ ndị India India n'ihe ize ndụ, gụnyere nke Ndị India ndị kewara ekewa dị nnọọ mfe.
GDF na-arụ ọrụ kachasị mkpa n'ime mgbidi mmiri na Brazil ma jikọta aka na Jirau Mega Dam ugbu a na-ewu na Osimiri Madeira na Western Amazon. Mmiri a egwu nke ókèalabụ nke ọtụtụ ndị amaala, tinyere ọtụtụ ndị India, na-adabere na ha na-adị ndụ.
Ndị India Brazil na ndị na-akwado ha kwadoro nzukọ ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ, na-agba GDF ume ka ha hapụ ọrụ imebi mmiri na-ege ntị ma gee ndị Indians ntị, bụ ndị a na-ejighị nlezianya nyochaa banyere ọrụ ahụ. Jirau Dam.
Onye ndu ala Indigenous Sônia Guajajara, onye ikpeazụ March zutere ndị nnọchiteanya nke GDF ma duzie ya ihe omume na Paris, kwuru, sị: "Ihe omume nke GDF Suez bụ ihe na-emerụ ahụ gburugburu ebe obibi, ha na-enyekwa aka n'ibibi olu na ọdịbendị nke ndị amaala na ndị omenala Amazon".
lE nke ndi amaala Brazil na Coordination of Indian Indian Organisation edeela akwụkwọ ozi nye Onye isi ala nke GDF Suez, Gérard Mestrallet, na-ekwupụta na imebi ọha na eze megidere ụkpụrụ nke ya na ntinye ya na ụkpụrụ United Nations. Ihe oru mgbochi Jirau megidere iwu ndi Brazil na Mgbakọ 169 nke Organizationtù Ndị Ọrụ Mba Nile.
Christian Poirier sitere na nzukọ ahụ Watch Amazon, na-abịa ụnyaahụ na ngosipụta ahụ, kwuru, sị: “Movementmụ amaala obodo ama ama katọrọ akparamaagwa na omume ọjọọ nke onye ndu ụwa a. Ngosipụta nke taa chọrọ ibugharị ndị ọrụ GDF Suez bụ ndị ga-achọ ka ndị isi ụlọ ọrụ na-asọpụrụ ọrụ ha. Bido na steeti French nke nwere pasent 36% nke GDF Suez ”.
E nwere ma ọ dịkarịa ala Otu 77 nke ndị India dịpụrụ adịpụ na Brazil. Ha bụ ndị kachasị emetụta obodo. Surlanahụ gbara ndị gọọmentị Brazil ume ka ha chebe ala ha maka iji ha eme ihe naanị maka na ọ bụ naanị ụzọ iji gosi na ha ga-adị ndụ.
N'ihe dị ka FIFA World Cup, Ịhụhụhụeja kpughere "ihu zoro ezo nke Brazil". Pịa ici iji mụtakwuo gbasara ọnọdụ ndị India India na mmegide gọọmentị na-emebi ikike ha nwere.
Afọ 50 nke njehie geostrategic nke ndị isi Africa
Gịnị bụ omume ndị Africa n’onwe ha n'ebe ahia ohu?